RASMI: Kooxda Manchester United oo qandaraaska u kordhisay Macallinkeeda Ole Gunnar Solskjaer… (Imise sano ayuu saxiixay?) – Gool FM
(Manchester) 24 Luulyo 2021. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa heshiiska u cusboonaysiisyey Manchester United, waxaana uu qalinka ku duugay qandaraaska kooxda ku sii hayn doona ilaa ugu yaraan sanadka 2024-ka, isagoo weliba qiyaar u haysta in sanad kale uu ku kordhin karo heshiiskiisa haddii loo baahdo.
Macallinka reer Norway ayaa shaqada Kooxda ka bedelay Jose Mourinho, kaasoo la cayriyey sanadkii 2018-kii, waxaana haatan uu qallinka ugu duugay heshiis cusub kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford.
Solskjaer ayaa kaalinta labaad ee Premier League ku hoggaamiyey Man United xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana uu sidoo kale geeyey final-ka Europa league, isagoo haatan rajaynaya in fasal ciyaareedkan cusub ee 2021-22 koob kula guuleysto naadiga Man United.
Markii macallin Solskjaer loo magacaabay Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda markii la cayriyey Mourinho ayaa heshiis joogto ah loo gacan geliyey bishii Maarso ee 2019-kii.
Kooxda Man United oo heshiiskan cusub xaqiijisay ayaa shaaca ka qaadday in naadigu uu ku farraxsan yahay inuu ku dhawaaqo qandaraas kordhinta Ole Gunnar Solskjaer.